Izy ireo dia avy nandroba mpivady mpivarotra izay vao nahazo vola mitentina enina tapitrisa ariary. Nandeha moto roa ireo jiolahy efatra tamin’ny fanatontosana ny fanafihana. Ny roa tamin’izy ireo no maty voatifitra nandritry ny fisamborana, herinandro taty aoriana. Mampiteny ny moana ireo jiolahy mandeha scooter ao Toamasina izay sahy mitifitra avy hatrany.
Tsy atahorana hisy fiantraikany ratsy eto Madagasikara ilay rivodoza Alcide ao amin'ny ranomasimbe indianina amin'izao. Mbola any amin'ny 400 km no misy ny foibeny. Na izany aza, amin'ny alatsinainy vao mety hanomboka hilatsaka ny orana hoy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Afaka maka tsirony faramparany izany ny mponina amin’ny faran’ny herinandro alohan’ny hahatongavan’ny tena fahavaratra.
Anio no hamoaka vokatra sarotsarony na” tendance” amin'ireo ho tafakatra fiodinana faharoa ny Ceni hoy ny filohany. Nanamafy izy ireo fa ny vokatra avy amin'ny Ceni sy Hcc ihany no manankery fa tsy ny avy amin'ny QG tsirairay. Hatreto anefa dia samy miezaka ny QG tsirairay avy fa ny kandidà an’izy ireo ihany no mandresy. Efa tonga hatramin’ny fifamaliana etsy sy eroa aza amin’izao fotoana izao, indrinra amin’ny tambajotra sosialy.
Nobatain’ny jiolahy hatramin’ny renim-pianakaviana tao an-trano, tany Manjakandriana. Nandritry ny fanafihana ilay tokantrano no nitranga izany. Tsy faly tamin’ny entana izay nalaina tao ireo jiolahy dia nalainy hatramin’ny olona. Vola iray hetsy no lasa ary izany no nahatezitra ireo olon-dratsy izay tsy afa-po. Mbola lavitra ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana ary manjaka tokana ny jiolahy, indrindra any ambanivohitra.
Manao tsipaky ny miala aina i Hery Rajaonarimampianina ary namoaka fanambaràna fa tsy milamina ny fifidianana izay natao teo ary feno hosoka. Nilaza ny hametraka fitoriana eny anivon’ny Ceni ity filoha teo aloha ity izay sady kandidà rahateo. Hatreto dia tsy nihoatry ny telo isan-jato ny vato azony ary tena nivoaka tamin’ny varavarana tery ny lehilahy taorian’ny voninahitra farantampony izay azony. Ao anatin’ny lalao avokoa anefa izany.
Mitentina 120 tapitrisa ariary no tadiavin’ireo mpaka an-keriny ny zanaka karàna iray tetsy Manerinerina. Milaza ny rainy fa tsy manana izany vola izany ary tsy hitany izay hatao manoloana ny zava-misy. Tsy voafehy hatrany ny resaka fakàna an-keriny izay tsy eto an-drenivohitra intsony fa miitatra any amin’ny faritany. Hatrany ambanivolo aza efa lasa fanaon’ny dahalo ny maka olona hatao takalon’aina ary hangalana vola ny fianakaviany avy eo.